"စာအုပ်ချစ်သူများနေ့အမှတ်တရ စာအုပ်ချစ်သူတိုင်း စာအုပ်လက်ဆောင် ရယူလိုက်ပါ"
မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါ ဝန်ဇင်းစာချစ်သူတို့ရေ ????????
ဒီနေ့က စာအုပ်ချစ်သူများနေ့ လေးပဲဖြစ်ပါတယ်... ????‍♀????‍♀
ဒီတော့ စာအုပ်ချစ်သူတိုင်းအတွက် စာအုပ်လက်ဆောင်ပေးမဲ့ အစီအစဉ်လေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးလိုက်တယ်နော်..
ပေးမဲ့စာအုပ်က - အခုလက်ရှိမှာ ဟော့ဖြစ်နေတဲ့ You Can You Will (သင်လုပ်နိုင်တယ်၊သင်လုပ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်) ဆိုတဲ့ စာအုပ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်... ????????
ဒီတော့ စာအုပ်လက်ဆောင်ရဖို့ ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲ
အဆင့် (၁) ။ ။ Wun Zinn App လေးကို ဖုန်းထဲမှာ အရင်သွင်းထားရမှာပေါ့နော်.. App ကို အခမဲ့ ရယူဖို့ http://bit.ly/wz_play ကို နှိပ်ပါ။ ပြီးရင် ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ Operator(MPT/Telenor/Ooredoo/McTel) နဲ့ ငွေ ၃၀၀၀ ကျပ်ဖြည့်ပေးရပါမယ်...
အဆင့်(၂)။ ။ အရောင်းစာမျက်နှာပေါ်က စာအုပ်ချစ်သူများနေ့ အမှတ်တရ(ရသစာအုပ်များ သို့ မဟုတ် ဘာသာပြန်နှင့်အောင်မြင်ရေးစာအုပ်များ) Category ထဲက ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ (၆) အုပ် ဝယ်ပါ။
အဆင့်(၁) ကော အဆင့် (၂) ကို ပြုလုပ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ စာအုပ်လက်ဆောင်ကို အိမ်ရောက်လာဖို့ စောင့်နေလိုက်ပါတော့... ရန်ကုန်ဆို ???????? အိမ်အရောက်၊ နယ်မြို့များဆိုရင်တော့ ???? ????နီးစပ်ရာစာတိုက်အထိ (စာအုပ်တန်ဖိုး+ပို့ခ) အခမဲ့ နဲ့ လက်ဆောင်ပို့ပေးမှာ..
????‍♀ ????‍♀ ကဲစာချစ်သူများရေ အခုပဲ စာဖတ်ဖို့ စာအုပ်တွေဝယ်ယူရင်း လက်ဆောင်စာအုပ်လေးရယူလိုက်ပါခင်ဗျာ
✅ ✅ဒီ ပရိုမိုရှင်းလေးကို (၉.၈.၁၈ မှ ၁၂.၈.၁၈) ထိပြုလုပ်ပေးသွားမှာပါ။
App ရှိသူရော မရှိသေးတဲ့ စာချစ်သူများလည်း ပါဝင်ဆင်နွှဲပြီး စာအုပ်လက်ဆောင်ရယူလို့ ရပါတယ်ခင်ဗျာ...
အကြောင်းအရာမျိုးစုံ တင်ပြထားတဲ့ Wun Zinn Digest ပါတဲ့ Wun Zinn နောက်ဆုံး ဗားရှင်း ကို http://bit.ly/wz_play လင့်ခ်ကိုနှိပ်၊ အခမဲ့ Download ပြုလုပ်ပြီး စာအုပ်ကောင်းတွေ နဲ့ ကဏ္ဍမျိုးစုံကို လေ့လာနိုင်ပါပြီလို့လည်း ပြောပါရစေ …...။
အခက်အခဲ တစ်စုံတစ်ရာရှိပါက သိလိုသည်များကို Hot Line - 09252545753 မှာ မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျ။